Syria: Fahanginana Manoloana Ny “Famonoana Faobe Goavana Kokoa” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2017 8:47 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, Español, Shqip, Ελληνικά, English
(Marihina fa tamin'ny 14 Martsa 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Tamin'ny 29 Febroary, nandrahona ny “Famonoana Faobe Goavana kokoa” ho an'ny Palestiniana i Matan Vilnai, Minisitra lefitry ny Fiarovana ao Israely. Mampitaha ity fanehoan-kevitra ity amin'ny fahanginan'izao tontolo izao ilay bilaogera Syriana Ayman, avy ao amin'ny Damascene Blog sy ny fisahotahana manoloana ny antson'ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad tamin'ny ‘famafana an'i Israely eo amin'ny sarintany.”
Hoy i Ayman (Ar) nanazava:
Mijoro izao tontolo izao ary tsy mipetraka, raha niresaka momba ny famafana an'Israely ao amin'ny sarintany i Ahmadinejad. Naneho hevitra momba izany ny lohan'ny fanjakana rehetra, ny gazety, ny gazetiboky ary eny fa na dia ny filohan'ny Firenena Mikambana ihany koa aza, ary nampanantsoina mba hihaino ny hetsi-panoherana ny Ambasadaoro Iraniana isan-drenivohitra. Na izany aza, rehefa misy manampahefana ao amin'ny governemanta Israeliana mandrahona ny hanao Famonona faobe vaovao ao Gaza, dia tsy raharahiana ny olana toy ny hoe tsy misy dikany izany.
Mandrahona ny firenena hafa amin'ny “Famonoana Faobe kokoa” ankehitriny ny fitondram-panjakana izay milaza fa misolontena ny olona izay mijaly noho ny tebitebin'ny Famonoana Faobe araka ny nambaran'ny minisitra Israeliana. Na dia teo aza izany, dia tsy tokony hisy ny fanamelohana ho an'ity olana ity na fanehoan-kevitra, na dia miroso amin'ny fampiharana ny fandrahonana aza i Isiraely .
Iharan'ny fanadiovana ara-poko sy ny heloka bevava an'ady ny Palestiniana, nanomboka tamin'ny famonoana ny vondron'ireo natao sesitany tamin'ny taona 1948. Tsy misy isalasalana ny tena himasoany ankehitriny eo amin'ny resaka fanidiana ny sisintany, ny sazy sy ny famonoana ny olon-tsotra, fa mitovy amin'ny fampijalina ny Jiosy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Ary lasa mahazatra ho an'ny olona rehetra izay manao ity fampitahana ity ny hiantsoana azy hoe antisemita.